2000 on MG ( B –3)ပွင့်သောပန်းတိုင်းလန်းစေချင် (၂၉) by May Aye Oo | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Ideas & Plans » 2000 on MG ( B –3)ပွင့်သောပန်းတိုင်းလန်းစေချင် (၂၉) by May Aye Oo
2000 on MG ( B –3)ပွင့်သောပန်းတိုင်းလန်းစေချင် (၂၉) by May Aye Oo
ပွင့်သောပန်းတိုင်းလန်းစေချင် (၂၉) by May Aye Oo on Friday, March 30, 2012 at 4:45am ·
မြိတ်မြို့မှာ ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်းဖွင့်မယ်.. ဆိုတော့ ကျမရဲ့ volunteer တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာဇော် (မြိတ်သား) က မြိတ်မြို့ရဲ့ အခြေအနေနဲ့ မြို့က ကလေးတွေအတွက်.. လိုအပ်ချက်ကိုပြောပြပါတယ်..။ ကျမတို့ကလဲ မြို့တစ်မြို့၊ ရွာတစ်ရွာကိုသွားမယ်.. ဆိုရင်.. နယ်မြေ လိုအပ်ချက်ကို ကြည့်ပြီး၊ သိပြီး လိုအပ်တာတွေကို ကလေးတွေကို ပေးနိုင်ဖို့ သင်ကြားမယ့် ဘာသာရပ် နဲ့ အကြောင်းအရာ ကို ရွေးချယ်ပါတယ်..။
မြိတ်မှာတော့ ပထမဆုံးဖွင့်ရတဲ့သင်တန်းလဲ ဖြစ်လို့ ..
ပထမ မင်္ဂလာ (အသေဝနာစ ဗာလာနံ)
သက်ရှည်ကျန်းမာ မူးယစ်ဆေးဝါး ရှောင်ရှားပါ
ကြွပ်ကြွပ်အိတ် … စတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေ သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်..။
သင်တန်းသား ကလေးငယ်များ ၄ တန်းမှ ၈ တန်းထိ ၂၇ဝ ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်..။
ညနေခင်း အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းမှာလဲ ကလေးတွေ အားလုံးလာတက်ကြပါတယ်..။ Pocket Dictionary လေးတွေ လဲ တစ်အုပ်စီ ဝေပေးပြီး၊ Dictionary ရှာနည်း သင်ပေးပါတယ်..။ အဖွဲ့လိုက်ပြိုင်ပွဲတွေလဲလုပ်ပေးတာမို့ ကလေးတွေ တော်တော် အတတ်မြန် ပါတယ်..။ ပြီးတော့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေကို အင်္ဂလိပ်လို အခေါ်အဝေါ်တွေ သင်ပေးပါတယ်..။ Greetings နဲ့ Introduce လုပ်နည်းတွေလဲ သင်ပေးပြီး Roll Play တွေလဲ လုပ်ခိုင်းတဲ့အတွက် အတွဲလိုက်ထွက်ပြောကြပြီး ဆုတွေလဲပေးပါတယ်..။
ကလေးတွေက သင်တန်းနောက်ဆုံးရက် presentation မှာလဲ တော်တော်ပြောနိုင်ကြပါတယ်..။ သင်ထားတဲ့ ခေါင်းစဉ် ၅ ခုကို ရှေ့ထွက်ပြီး မိုက်နဲ့ပြောရတာပါ..။ ကလေးတွေကို လူရှေ့မှာ ပြောရဲ၊ ဆိုရဲ တဲ့ သတ္တိမွေးပေးတာပါ..။
ကျမတို့လဲ မြိတ်လို ဝဲတဲတဲ ပြောတာနဲ့ နဲနဲကွဲပြားတဲ့ စကားလုံးတွေ တတ်လာပါတယ်..။ ဥပမာ – ဗိုက်ဆာတာကို ဝမ်းဟာတယ်..။ တော်တော်ဆာလာရင် – ငတ်လာပြီ။ အရမ်းဆာလာပြီဆိုရင်တော့ – ငတ်တက်လာပြီ..။ လို့ပြောကြတာမျိုးပေါ့..။ ထမင်းဗူး ကို ထမင်းပုံး။ အပေါ့သွားချင်ရင် – သေးရောင်သွားမယ်။ ဘောပင် ကို မင်တံ။ ပိုက်ဆံကို ကြေးပြား။ သေးတာကို – ငယ်တယ် လို့ ပြောကြပါတယ်..။ သားလေး ဆိုရင် သားငယ်။ ပုလင်းသေး ဆိုရင် ပုလင်းငယ်.. ပေါ့။
နောက်ဆုံး နိဗ္ဗာန်ဈေးကတော့ အပျော်ဆုံးပေါ့..။ ဆိုင်ပေါင်း ၁၅ ဆိုင်လောက်ရှိပါတယ်..။ နယ်ခံတွေကလဲ မုန့်အမျိုးမျိုး ဝေကြလို့ ပျော်စရာတော်တော်ကောင်းပါတယ်..။
Children Camp 42 / 2012 Myeik ( 25-27 March, 2012 )
ကလေးတွေ ဒီသင်တန်းလေးကြောင့် အသိလေးတွေ၊ ပညာလေးတွေ ရသင့်သလောက်တော့ ရသွားကြတယ်.. လို့ ယုံကြည်ပါ တယ်..။ သင်တန်းမှာ ကလေးတွေကို စာသင်ပေးတာအပြင် လူကြားထဲမှာ ပြောရဲဆိုရဲတဲ့ သတ္တိ၊ စဉ်းစားတတ်တဲ့ ဉာဏ်၊ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်တတ်တဲ့ စိတ်ဓါတ်၊ တာဝန်ယူတတ်တဲ့စိတ်၊ ဘာသာတရားကို မြတ်နိုးတတ်အောင်၊ ရတနာသုံးပါး၊ မိဘ၊ ဆရာသမား တွေကို ကြည်ညိုတတ်အောင်.. စတာ .. တွေလဲ ပေးခဲ့ပါတယ်..။ သင်မှန်းမသိ၊ သင်ပေးတဲ့နည်းပါ..။ စာသင်ရင်း၊ ကစားရင်း၊ ကဗျာတွေ သင်ရင်း.. ကိုယ်ပေးချင်တာလေးတွေ ထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့လေ..။
Children Camp 42/2012 Myeik ( 25-27 March, 2012 )
Clinics at Children Camp 42 / 2012 Myeik ( 25-27 March,2012 )
ကျမတို့ရဲ့ အလှူရှင်များ သာဓုခေါ်နိုင်ဖို့ပြောပြချင်တာလေးက .. ကျမတို့ရဲ့ အခမဲ့ ဆေးခန်း ကို ပထမဆုံးနေ့ (၂၅-မတ်-၂၀၁၂) မှာဘဲ ကလေးမလေးတစ်ယောက် .. သူ့အမေနဲ့အတူ လာပြပါတယ်..။ အဖေက ပငျလယ်ထဲထွက်နေပါတယ်.. တဲ့..။ ရေလုပ်သားပါ..။ ကလေးက ၁၂ နှစ်တဲ့၊ သူငယ်တန်း ပါတဲ့..။ ကလေးက အူအတက်မှာ ပြီတည်ပြီး အထဲမှာ အကြိတ်အခဲဖြစ်နေပါပြီ..။ ခွဲစိတ်အထူးကု ဆရာဝန် နဲ့ ပြပြီး ခွဲရမှာကို .. ပိုက်ဆံ မတတ်နိုင်လို့ မပြဘူး.. တဲ့..။ ကျမတို့ရဲ့ volunteer ဒေါက်တာ အေးအေးတင့် က .. “မခွဲရင် သေမှာ..” လို့ ကျမကို ပြောပြပါတယ်..။ “ကလေး အမေက ပိုက်ဆံမရှိလို့ သူ့ကလေး သေတာကို ဒီအတိုင်း ကြည့်နေရတော့မယ်..” တဲ့..။ ဒါနဲ့ ကျမက “ဒါတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးလေ..” နော်..။ “တို့တွေ ဒီကလေးကို ခွဲစိတ်ပေးရအောင်..။ ဘယ်လောက်ကုန်မယ်.. ဆိုတာ.. စုံစမ်းပြီး.. လိုအပ်သလို ဆက်လုပ်ပေးကြတာပေါ့..။ တို့တွေက ငွေထုပ်ပိုက်ပြီး.. အသက်ကယ်ချင်လို့ပါ .. ဆိုရင်တောင် အခုလို ကြုံကြိုက်ချင်မှ ကြုံမှာ..။ အခုတော့ ကူညီခွင့် ကြုံလာတာမို့ ဝမ်းသာစရာပါ..” လို့ .. ဆုံးဖြတ်ကြပြီး..၊ နောက်တစ်နေ့ (၂၆-မတ်-၂၀၁၂) မှာ ကလေးကို ဆေးရုံတင်ပေး လိုက် ပါတယ်..။
Patient on Hospital ( Myeik ) March 26, 2012
ဆရာဝန်ကြီးကလဲ.. emergency case မို့ နောက်တစ်နေ့ (၂ရ-မတ်-၂၀၁၂) ရက်နေ့ မနက်မှာ (ရုံးပိတ်ရက် ဖြစ်ပေမဲ့) ချက်ချင်း ခွဲပေးပါတယ်..။ အထဲမှာ တော်တော်များနေလို့ အူတွေမှာတောင် ကပ်နေလို့ တော်တော် ပင်ပင်ပန်းပန်း ကြိုးစားလိုက်ရ ပါတယ်..။ ခွဲချိန် ၂ နာရီကျော်ကြာပြီး၊ မေ့ဆေးပေးထားတာနဲ့ မလုံလောက်တော့လို့ ထုံဆေးတောင် ထပ်ပေးရပါသတဲ့..။ ဆေးရုံတင်တော့ ကျမရယ်..၊ ဒေါက်တာ အေးအေးတင့် ရယ်၊ နယ်ခံ ၂ ယောက်ရယ်.. လိုက် ကူညီပေးကြ ပါတယ်..။
ကလေးရဲ့ မျက်နှာကလေးမှာ နာကျင်မှုလေးတွေကို မြင်နေရပါတယ်..။ စကားလဲ တစ်လုံးမှမပြောဘဲ.. မျက်နှာကလေးက ရှုံ့မဲ့နေ တာပါ..။ “ဆေးရုံတင်ပေးမယ် ခွဲစိတ်ဖို့ အားလုံးတာဝန်ယူပေးမယ်..” လို့ ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့.. ဒေါက်တာ အေးအေးတင့် ရဲ့ မျက်နှာကိုမော့ကြည့်ပြီး ပြုံးပြရှာပါတယ်..။
ဆေးရုံအသွား လမ်းမှာတင် မိုးတွေကရွာတော့ . ကလေးမလေးက ချမ်းနေရှာတာမို့ ကျမက ကျမရဲ့ ပုဝါနဲ့ သူ့ကို ပတ်ပေး ထားလိုက်ပါတယ်..။ အဲဒီ ပုဝါက ကျမ လက်ဆောင်ရထားတာပါ..။ လက်ဆောင်ပေးတဲ့သူလဲ ဒီကုသိုလ်တွေ ရတာပေါ့..။ ဆေးရုံရောက်တော့ ကလေးအတွက် အခင်းမပါလို့ အဲဒီ ပုဝါနဲ့ဘဲ ခင်းပေး လိုက်ပါတယ်..။ မီးကလဲ ပျက်သွားလို့ ကျမ ကချင်ပြည်နယ်ကနေ လက်ဆောင်ရထားတဲ့ ဓါတ်မီးလေးကို ပေးခဲ့ပါတယ်..။ ကျမက ကျမမှာ ပေးစရာ အဆင်သင့်ရှိနေတာကို ဝမ်းသာလိုက်တာ..။
ခွဲခန်းဝင်တဲ့အချိန်မှာတော့ ကျမတို့ရဲ့ volunteer ဒေါက်တာ အေးအေးတင့် က တောက်လျှောက်စောင့်ပေးပါတယ်..။ လိုအပ်တာ တွေ အားလုံး လုပ်ပေး၊ စာရင်းရှင်းပေးခဲ့ပါတယ်..။ ဆရာဝန်ကြီးက ခွဲခ မယူပါဘူး..။ ကျမတို့ က ခွဲခန်းစရိတ်၊ ဆေးစရိတ်တွေ ဘဲ ကုန်တာပါ..။ ပြီးတော့ ဆက်ပြီးကုန်ကျမယ့် ဆေးဘိုးတွေ နဲ့ ဆေးရုံတက်နေတုံး ထမင်းစားဖို့လဲ ရအောင် ငွေတစ်သိန်း ပေးခဲ့ပါသေးတယ်..။ ဒီ့ထက်ထပ်လိုအုံးမယ်.. ဆိုရင်တော့ မြိတ်က နယ်ခံ တစ်ဦးက ဆက်ကူညီမယ်.. လို့ဆိုပါတယ်..။ ကျမတို့ က (၂၈-မတ်-၂၀၁၂) ရက်နေ့ပြန်မှာမို့ မပြန်ခင် ၂ရ ရက်နေ့ ညဘက် မှာ ဆေးရုံကို တစ်ခေါက် ထပ်သွားကြည့်ခဲ့ပါသေးတယ်..။ ကျမတို့ ကြုံကြိုက်လို့ ကလေးတစ်ယောက်.. လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်ခွင့်..၊ ကူညီခွင့်ရခဲ့တာ.. အရမ်းဝမ်းသာမိပါတယ်..။ ဒီကုန်ကျစရိတ်ဟာ .. အလှူရှင်တွေ ဝိုင်းဝန်းလှူဒါန်းထားတဲ့ fund ထဲကဘဲမို့ ဒီကောင်းမှုသည်.. အလှူရှင်များအားလုံးရဲ့ ကောင်းမှူဖြစ်ပါတယ်..လို့ပြောချင်ပါတယ်..။
(ဒီနေ့မနက် ၂၉-၃-၁၂ မှာ ကျမသားကြီး နဲ့ နယ်ခံ တစ်ဦးနဲ့ သွားကြည့်ကြပါသေးတယ်..။ ကလေး အခြေအနေကောင်းပါတယ်.. တဲ့..။ လိုအပ်ရင် ဆက်ကူညီပေးဖို့လဲ အဲဒီ နယ်ခံ တစ်ဦး ကို ပြောခဲ့ပါတယ်..။ ကျမသားကြီး လင်းထက်ဦး က မနေ့က လေယဉ်လက်မှတ် မရလို့ ကျန်ခဲ့တာပါ..။ ဒီနေ့ပြန်မလာခင် သွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်.. တဲ့..။
၃၀-မတ်လ-၂၀၁၂ (မနက်ဖြန်) မှာတော့ ကျမတို့ လဲလူရွာကို သွားကြမှာပါ..။ အခမဲ့ဆေးခန်းရယ်.. ၊ ပညာရေးအလှူ ရယ်ပေါ့..။
ပြီးတော့ .. ၅-ဧပြီ-၂၀၁၂ မှာတော့ ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ထုံးဘို က မြောင်ရင်းရွာကို သွားပါမယ်..။
ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်း ၄၃/၂၀၁၂ ၊ အခမဲ့ဆေးခန်း နဲ့ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း တွေဖွင့်မှာလေ..။
အဲဒီအတွက်လဲ အလှူခံပါရစေအုံးနော်..။ နွေရာသီရဲ့ လတွေမှာ ကလေးတွေ ကျောင်းပိတ်နေတာမို့ ကျမတို့လဲ ခရီးစဉ်တွေ များပါတယ်..။ အဲဒီတော့ fund လဲ များများလိုလာတာပေါ့… ရှင်..။
Is this the post what you requested yesterday? Now I do it.
This is honoring present for your2stars.
I do proud of you and Daw May Aye Oo.
Let’s try our best for out Mother Land.
ကောင်းလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ပါ။ ဒါမျိုးက တကယ့်ကို ကုသိုလ်ရပါတယ်။ လှုတဲ့သူရော အလှုခံတဲ့သူပါ နှစ်ဦးနှစ်ဝ အကျိုးရှိတဲ့ တကယ့်မွန်မြတ်တဲ့အလှုပါ။
They still need your support as much as you can.
Please try to help the others.
Please let me update from Daw May Aye Oo’s FB.
( Time of Update= 00:05 am Myanmar time (6April,2012 ).
• May Aye Oo ဆေးရုံမှာ ခွဲစိတ်ပေးခဲ့တဲ့ ကလေးမလေးက အခြေအနေကောင်းပါတယ်..။ ဒေါက်တာ စုဝေဖြိုးက ဆက်ပြီး သွားကြည့်ပေးနေပါတယ်..။ အနာလဲ ကျက်သလောက်ဖြစ်နေပါပြီ.. တဲ့..။ ချုပ်ရိုးဖြေပြီးရင် ဒီနေ့-မနက်ဖြန်လောက် ဆေးရုံက ဆင်းရပါမယ်..။ ကျမ ကတော့ အခုလို ကူညီနိုင်ခဲ့တာကို အရမ်းကို ဝမ်းသာမိပါတယ်..။
Yesterday at 8:22am • Like • 1
May Aye Oo ကျမကို ချစ်လို့ ဟိုတလောကမှ .. ပုဝါလေး လက်ဆောင်ပေးထားတာ.. သဇင်လွင်.. ပါ..။ သဇင်ရေ.. ရှင်ပေးထားတဲ့ ပုဝါလေးတော့ တို့ လက်ဆင့်ကမ်းပြီး လှူလိုက်ပြီ..။ ဒီကုသိုလ်တွေက ရှင့်အတွက်ပါ.. အမျှယူနော်..။
Yesterday at 8:24am • Like
May Aye Oo ကလေးမလေး ဆေးရုံက ဆင်းသွားပါပြီ..။ နေကောင်းပါတယ်..။ သူကလေးကို ကျောင်းဆက်တက်စေချင်ပါတယ်..။ ကျောင်းဆက်ထားပေးချင်တာ.. မြိတ်မှာ ဆိုတော့ အလှမ်းဝေးနေလို့မို့ ကူညီနိုင်အောင် ကြိုးစားကြည့်ပါအုံးမယ်..။ ကူညီချင်ကြသူများ 2000.donation.group@gmail.com ကို ဆက်သွယ်ပါရှင်..။
Please try to help any one whom needed.